Asifuni ukunqoba e-South Africa kuphela – u-Du Plessis
Standard Bank Proteas Test captain, Faf du Plessis
Ukapteni wama-Standard Bank Proteas kuma-Test, u-Faf du Plessis, usethathe umthwalo wokunweba irekhodi eliqhenyayo lama-Standard Bank Proteas bedlala ngaphandle kwasekhaya kwi-Test series yemidlalo embili bedlala ne-Sri Lanka ezoqala e-Galle ngoLwesine. Okokuqala u-Du Plessis ezobe engukapteni kwi-sub-continent, futhi ukuqala komsebenzi ukuqinisa irekhodi lama-Proteas kwi-sub-continent.
Ama-Proteas anqobe ama-series ayisikhombisa kulawa ayisishagalombili abawadlala selokhu u-Du Plessis aba ukapteni ngo-2016, futhi uzobhekana nenselelo yokuqala kuma-wicket asheshayo futhi aluhlaza e-Galle International Stadium.
“Kuyangijabulisa mina,” ekhuluma kwi-press conference ngaphambi komdlalo e-Galle ngoLwesithathu. “Ngiyazithanda izinselelo ezizanakho. i-sub-continent indawo enzima yokufika udlale ngakho kumele ugqugquzele abadlali ukuthi bazi ukuthi kunethuba lokwenza okukhulu. Njengeqembu, sisondele ngalapho eminyakeni embili edlule, lokho bekungigqugquzela kakhulu kanye neqembu, asilona iqembu elifuna ukunqoba e-South Africa kuphela.”
Le-series imaka unyaka wesi-25 se-bilateral series phakathi kwe-Sri Lanka ne-South Africa, impi eyaqala ngo-1993 ngesikhathi iqembu elaliholwa u-Kepler Wessels lihamba okokuqala. Kusukela lapho, amaqembu adlala imidlalo engu-25, i-South Africa inqoba engu-14, i-Sri Lanka engu-5.
“Hlezi kuyi-series enhle sidlala ne-Sri Lanka,” esho. “Amaqembu amaningi athi afuna ukuzivivinya uma bedlala kwisimo sangaphandle, futhi i-South Africa inerekhodi elihle langaphandle. Sahlulwa kuma-series amabili kuphela, sidlala ne-India ne-England, futhi okokugcina silapha (2014) sadlala kahle futhi sanqoba i-series okwesibili selokhu kwahlanganwa.”
“Silindele ukuthi izobanzima le-series, i-Sri Lanka kwisimo sasekhaya iyiqembu elihlukile. Sadlala kahle nabo e-South Africa, kodwa lapho kwakuyisimo sethu lapho ama-pitch ethanda ukuphosa ngokushesha. Silindele ama-pitch ahlukile, ome kakhulu, ngakho silindele imidlalo kanye nobumnandi.”
Abazodlala abangu-XI basazokhethwa, kodwa u-Du Plessis ukhombisile ukuthi bazoncika kulokhu okubasebenzelayo kokuhlasela ngabadlali abathathu abaphosa nge-pace. Iqembu lcasulwa imvula ezinsukwini ezimbili sokulungiselela e-Galle, kodwa bayathemba ukuthi amalungiselelo abo emuva kwesonto elinzima lokuqeqesha e-Colombo.
“Sisacabanga ukuthi yimaphi ama-seamers amathathu azolungela lesimo,” u-Du Plessis esho. “Asisitholanga isikhathi esanele ezinsukwini ezimbili ezidlule, ikakhulukazi abaphosayo, kodwa sinomcabango. Sizobona kusasa.”
“Siyibukile i-wicket futhi yomile. Kuzomele sibheke ukuthi sizokwazi noma angeke sikwazi ukudlala nabadlali abashayayo abayisikhombisa noma ama-spinners amabili, lokho sisazokubheka. Siyakholwa ukuthi ama-seamers ethu amathathu, kwi-pitch eyomile, bangawathola ama-wicket. Ibhola lizothola i-reverse-swing uma phakathi nendawo komile futhi kune-spin, ne-pace, i-reverse-swing ikhona.”
“Imidlalo ye-Test inqotshwa abaphosayo futhi nekhono labo lokuthola ama-wicket,” echaza. “Sibenenhlanhla yokuba ne-pace attack enhle, no-Keshav Maharaj engena kwiqembu lama-Test onyakeni odlule, ubesiphosela kahle. Ngiyezwa kodwa ukuthi kulaba abasiphoselayo sinalo ikhono lokuthatha ama-wicket angu-20 kunoma iyiphi i-wicket.”
Umdlalo uzoqala ngo-10h00 khona.
Uqinile u-Rabada futhi ulungele ukusebenza ‘Positive’ cricket key to sub-continent success – Gibson Uqhakazile u-Shamsi osukwini olunzima lokuphosa u-Markram ujabulela inselelo yakwi-sub-continent u-Steyn ubuya kuma-Proteas; kufakwe ama-spinners amathathu kwi-tour yase-Sri Lanka u-Rabada ubheka unyaka ohambe kahle u-AB de Villiers uthatha umhlalaphansi emuva komsebenzi weminyaka engu-14 kuma-Proteas i-CSA ne-CA bamemezela imidlalo yama-Proteas ngebhola elimhlophe behambele e-Australia i-CSA imemezelela imidlalo yasekhaya ye-season ka-2018/19 i-CSA ne-SLC bamemezela uhlelo lama-Proteas lihambela e-Sri Lanka u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina